जुआले आगो रक्षकको चौडाई राख्नु पर्छ किनकी Play'n GO चालक दलले आगो हटाउन थाले फायर जोकर जून 2016 मा स्लट मिसिन! जो वास्तव मा स्लॉट मा क्लासिक खेलहरु र गर्म जीत र अच्छे चुटकुले को रूप मा यस आश्चर्यजनक स्लॉट को सही मूल्य देखेको छ! स्लट मिसिनको यो आगो प्रतिकृतिसँग5स्थायी रूपमा सक्रिय भुक्तानी रेखाहरू,3रिलेहरू, र3पङ्क्तिहरू छन्। आगो आगोबाट उत्कृष्ट खजाना पाउनुहोस् पागल ट्रिकरटर हट आगो आगो जोकर रमाइलो स्लट मिसिन खेल्ने र आफ्नो winnings का आनंद!
आगो सुरू गर्नुहोस् र प्रजाहरू पाउनुहोस्!
आगोले घेराएको पागल जेस्टरको शानदार प्रदर्शन हेर्नको लागि तपाईले चाहेको हुनुपर्दछ। फायर जोकर अनलाइन क्लासिक स्लॉटमा, तपाईं आफ्नो दाँत बीचको राशिमा राख्न सक्नुहुन्छ 0.एक स्पिनको लागि 05 र 100 सिक्का। यस तैयारी पछि, तपाइँ3समान रेखाहरू मध्ये कुनै पनि5भुक्तानी लाइनहरूमा मेल खाने प्रयास गर्न खेल खेल्न सक्नुहुन्छ। आगो जोकर स्लॉटमा केही उपयोगी चालहरू छन्, जसले विजेता संयोजनहरू समावेश गर्दछ धेरै सजिलो बनाउँछ।
सबैभन्दा पहिले, नरकबाट हँसिलो जोकरको चित्र खेलमा वन्य प्रतीक प्रतिनिधित्व गर्न रोजिएको थियो। यसको सहयोगको साथ, तपाईं सबै विजेता रेखाहरू पूरा गर्नुहुनेछ किनभने जंगली प्रतीक खेलमा कुनै अन्य छविको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि रिफिनको आगो सुविधा हो, जुन धेरै मूल्यवान संयोजनहरू बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। यदि कुनै पनि2रिल्समा उही प्रतीकहरू भूमिको स्ट्याकहरू छन् तर तिनीहरू जित्ने संयोजनहरू बनाउँदैनन् भने, रिफिनको आगो बचाउन आउँछ! स्ट्याक्ड प्रतीक भएका रिलेहरू फ्रिज हुनेछन् र नि: शुल्क पुन: स्पिन प्रदान गरिनेछ!
पागल दिगो जेस्टर उनको आस्तीन मा अर्को चाल छ। तपाइँ यो सुविधालाई निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ किनभने तपाइँ आगो जोकर कैसीनो स्लट खेल्न सहयोगको साथमा एक अचम्मको अचम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एकपटक तपाईं समान तस्वीरहरूसँग रिलेहरूमा सबै9पदहरू भर्न प्रबन्ध गर्नुहुँदा, पागल जोकरले तपाईंलाई मल्टीपलिटरको हट व्हीलमा ल्याउनेछ! यसलाई खोल्नुहोस् र x2 बाट x10 बाट जित्नुहोस् बूस्टर पुरस्कारको लागि!
बैटम्यान र पेंगुइन पुरस्कार
विन योगको योगफल
फायर जोकर अपडेट गरिएको: जनवरी 21, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 फायर जोकर
2.0.0.4 बैटम्यान र पेंगुइन पुरस्कार
2.0.0.6 बेंचवरम फुटबल लडकियों
2.0.0.7 थन्डरपिन खरगोशहरू
2.0.0.8 विन योगको योगफल